Ra’iisul wasaare Kheyre oo maanta furay shir looga hadlayo horumarinta isgaarsiinta (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Ra’iisul wasaare Kheyre oo maanta furay shir looga hadlayo horumarinta isgaarsiinta (SAWIRO)
Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa maanta furay shir looga hadlayay horumarinta isgaarsiinta dalka oo soo qaban-qaabisay wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta Soomaaliya.
Shirkaasi ayaa waxaa ka qeyb galay wakiilo ka socday maamulada dalka iyo mas’uulyiinta shariikadaha isgaarsiinta, iyadoo shirkaan uu socon doono muddo seddax cisho ah, islamarkaana lagu falanqeyn doonno arrimo muhiim u ah isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada dalka.
Wasiirka boostada iyo isgaarsiinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdi Canshuur Xasan oo furitaanka shirkaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday ahmiyada ay Soomaaliya u leedahay isgaarsiinta casriga ah, wuxuuna xusay in shirkaani uu yahay kii ugu horeeyey ee ay soo agaasinto wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta ee lagu falan-qeynayo qaabkii loo wajahi lahaa isgaarsiin caafimaad qabta oo ka shaqeeysa horumarka dadka iyo dalka Soomaaliyeed.
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre oo furay shirka ayaa tilmaamay in Soomaaliya ay safka hore kaga jirto wadamada Afrika ee ku hormaray dhanka isgaarsiinta, iyadoo laga faa’iideysanayo fursadaha la haystana loo baahan yahay in shirkani ay ka soo baxaan tallooyin wax tar u leh isgaarsiinta dalka.
Sidoo kale, ra’iisul wasaare Kheyre ayaa sheegay in dowladu ay diyaar u tahay wixii wada shaqeyn ay uga baahan yihiin isgaarsiintu, loona baahan yahay in la yeesho iskaashi iyo isla xisaabtan dhab ah, ganacsataduna ay aaminaan dowladdooda, si wadajir loogu gaaro horumarka la hiigsanayo.
Ugu dambeyntii, ra’iisul wasaare Kheyre ayaa kula dar daarmay madaxda isgaarsiinta madaxa banaan inay si mas’uuliyadi ku jirto ay u gutaan shaqadooda ayna ku dadaalaan sidii ay dalkooda horumarkiisa qeyb uga noqon lahaayeen haddii ay tahay bixinta canshuuraha iyo wada-shaqeynta labada dhinac.